Muuqaal Kaa Oohinya :Wiil Suuriyan ah Oo Ku Soo Toosay Indhihiisii Oo Araga Beelay#Qiso Xanuun badan | Xaqiiqonews
Muuqaal Kaa Oohinya :Wiil Suuriyan ah Oo Ku Soo Toosay Indhihiisii Oo Araga Beelay#Qiso Xanuun badan
Wali waxaa isa soo daba taraya qisooyinka xanuunka badan ee ka imaanaya dalka suuriya kuwaasi oo ka dhashay madax adeegga-danbiile Bashaar al-asad iyo kooxaha ka soo horjeeda.
Xaqiiqonews-Wararka dibadda, Muuqaalo
Wiilkan oo lagu magacaabo cabdul muciin al-xasan waxa uu ka mid ahaa dadka ka soo qaxay magaalada #ximsa, waxa uuna ku soo toosay isaga oo indhaha la, ka dib markii lagu sameeyey qaliin ka dib dhaawac ka soo gaaray qarax.
Sida ay sheegeen dadka muuqaalka baahiyey, miina dhulka lagu aasay ayaa ku qaraxday wiilka ,taasi oo keentay in loola cararo isbitaalka.
Cabdi karim al-xasan oo aabaha dhalay wiilka waxa uu yiri “waxaan ka soo qaxnay baadiyaha Ximsa, waxaana markii hore aan u qaxnay Idlib, ka dibna waxaan ku sii qaxnay baadiyaha Cifriin, halkaasi oo cabdi muciin ay kula qaraxday miinada isagoo ciyaaraya”.
Muuqaalka ayaa waxa ka soo muuqanaya wiilka yar ee Cabdi muciin iyo aabihiis oo ku sugan mid ka mid ah qolalka baaritaanka ee isbitaalka, “Kalis” ee dalka Turkiga, wiilka waxa uu ku qeylinayaa codkiisa sare: “Baba Baba… … Indhahey indhaha indhaha …” aabahana waxa uu isku dayaa in uu iska yareeyo culeyska isagoo wiilka qaad qaadaya xilli ay dhawdahay in beerkiisa dhulka ku soo dhaco naxdin darteed.